လာလီဂါချန်ပီယံ ဘာစီလိုနာရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ အရေးပါတဲ့ နိုင်ပွဲများ
လာလီဂါချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ အရေးပါတဲ့ နိုင်ပွဲများ
30 Apr 2018 . 3:56 PM
ဒီပို့တီပို့အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ အနိုင်ယူပြီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘောလုံးရာသီ မကုန်ခင်မှာဘဲ စပိန်လာလီဂါ ချန်ပီယံဆုကို ဘာစီလိုနာအသင်း (၂၅)ကြိမ်မြောက် ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ စပိန်ဘုရင့်ဖလားပြိုင်ပွဲမှာလည်း ဆီဗီလာအသင်းကို ဂိုးပြတ်အနိုင်ရယူပြီး ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် တစ်ရာသီအတွင်း ပြည်တွင်းဖလား (၂)လုံးကို ရယူနိုင်ခဲ့တာပါပဲ။ အခုနှစ်ရာသီအစမှ ဘာစီလိုနာကို စတင်ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ နည်းပြ ဗယ်လ်ဗာဒီ Valverde အတွက်လည်း ပထမဆုံးရာသီမှာပဲ ဖလား (၂)လုံး ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေမှာပါ အသင်းကို ရှုံးပွဲမရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ရင် လာလီဂါ New Era မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ရှုံးပွဲမရှိဘဲ ချန်ပီယံဆုကို ရယူနိုင်တဲ့ အသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ရိုးမားအသင်းရဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ် ကျော်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပေမယ့် ပြည်တွင်းမှာတော့ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့ပြီး အသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် (၈)ကြိမ်မြောက် ပြည်တွင်းဖလား (၂)လုံး ချန်ပီယံအသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ လာလီဂါပြိုင်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိန်းဂဏန်းများနဲ့ အရေးပါတဲ့ နိုင်ပွဲတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ လာလီဂါ ကိန်းဂဏန်းများ
၂၅ – လာလီဂါချန်ပီယံဆုကို ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ လာလီဂါသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်း (၃၃-ကြိမ်)အပြီး ဒုတိယမြောက် အအောင်မြင်ဆုံး အသင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၄ – ပြိုင်ပွဲပြီးဖို့ (၄)ပွဲအလိုမှာ ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းဟာ (၂၁)ရာစု လာလီဂါပြိုင်ပွဲရဲ့ အကောင်းဆုံး စံချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
၃၄ – ဘောလုံးရာသီတစ်ခုအတွင်း (၃၄)ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိတဲ့ စံချိန်ကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၁၉၇၉-၈၀ ရာသီက ဆိုစီဒက်အသင်း တင်ထားခဲ့တဲ့ (၃၂)ပွဲ စံချိန်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၆ – အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုကို (၃၄)ပွဲ ကစားအပြီး ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ပွဲ အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
၃ – ရာသီကုန်ချိန်အထိ ရှုံးပွဲမရှိအောင် ကစားနိုင်ခဲ့ပါက လာလီဂါသမိုင်းတစ်လျှောက် တတိယမြောက် ရှုံးပွဲမရှိဘဲ အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆု ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘီလ်ဘာအို (၁၉၂၈-၂၉)နဲ့ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် (၁၉၃၁-၃၂)အသင်းတွေဟာ (၁၀)သင်းသာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရစဉ် အဆိုပါ မှတ်တမ်းကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး လာလီဂါပြိုင်ပွဲကို အသင်းပေါင်း (၂၀)နဲ့ ပုံစံသစ် ပြောင်းလဲကျင်းပတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ပထမဆုံးအသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄၁ – နောက်ဆုံးယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ (၄၁)ပွဲဆက်တိုက် ရှုံးပွဲမရှိအောင် ကစားထားပြီး လာလီဂါသမိုင်းမှာ ပွဲဆက်အများဆုံး ရှုံးပွဲမရှိတဲ့ မှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၆ – ဘာစီလိုနာအသင်းရရှိထားတဲ့ သွင်းဂိုး (၈၇)ဂိုးကို သွင်းယူပေးထားတဲ့ ကစားသမား အရေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ အရေးပါတဲ့ နိုင်ပွဲတချို့
ဘာစီလိုနာ ၅-၀ အက်စ်ပန်ညို (၉.၉.၂၀၁၇)
နေမာ Neymar ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ပိုင်း အသင်းတိုက်စစ်ပိုင်းအားနည်းနေတာကို ပြုပြင်နိုင်ဖို့အတွက် မထင်မှတ်ထားတဲ့ ကစားကွက်တစ်ခုကို နည်းပြ ဗယ်လ်ဗာဒီ Valverde ပထဆုံးပြောင်းလဲသုံးစွဲခဲ့တဲ့ ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ တောက်လျှောက် သုံးစွဲလာတဲ့ တိုက်စစ် (၃)ဦးထား ကစားရာကနေ (၄-၄-၂)ကစားကွက်ကို ပြောင်းလဲခဲ့တာပါပဲ။ ဆွာရက်ဇ် Suarez မက်ဆီ Messi (၂)ဦးကိုသာ တိုက်စစ်အတွဲအဖြစ် ထားကာကစားခဲ့တဲ့ ဒီကစားကွက်က နည်းပြ ဗယ်လ်ဗာဒီ Valverde ရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကတ်တလန်ဒါဘီမှာ ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲနဲ့ သတ်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် ၀-၃ ဘာစီလိုနာ (၂၃.၁၂.၂၀၁၇)
ဘာနေဗျူးကွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ အယ်လ်ကလက်စီကိုဒါဘီပွဲမှာ ပုံစံကောင်းတွေ ပြသနိုင်ခဲ့ပြီး အဓိကပြိုင်ဘက်အသင်းကို အဝေးကွင်း ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲနဲ့ ဦးချိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ရီးယဲလ်တို့ ပထမပိုင်းမှာ ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယပိုင်းမှာ ဆွာရက်ဇ် Suarez ရဲ့ သွင်းဂိုးနဲ့ ခံစစ်ပြိုဆင်းသွားခဲ့ပြီး မက်ဆီ Messi ရဲ့ ပယ်နယ်တီသွင်းဂိုး၊ လူစားဝင်ကစားသမား အဲလစ်ဗီဒယ်လ် Aleix Vidal ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့ နိုင်ပွဲရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲလစ်ဗီဒဲလ် Aleix Vidal သွင်းယူခဲ့တဲ့ တတိယဂိုးကို မက်ဆီ Messi ဖန်တီးပေးခဲ့ချိန်မှာ ဖိနပ်တစ်ဖက် ကျွတ်ကျန်ခဲ့တာက ဒီပွဲရဲ့ အမှတ်ရစရာ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆိုစီဒက် ၂-၄ ဘာစီလိုနာ (၁၄.၁.၂၀၁၈)
ဆိုစီဒက်အသင်းရဲ့ အိမ်ကွင်း ဆန်ဆီဘတ်ရှန်မှာ (၂၀၀၇)နောက်ပိုင်း ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုကျော်ကြာ လာလီဂါ နိုင်ပွဲမရရှိခဲ့တာကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်း အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့် ဆန်ဆီဘတ်ရှင်ကျိန်စာဆိုးလို့ ပြောလို့ရအောင်ကို ဆိုစီဒက်အသင်းရဲ့ အစောပိုင်း ဦးဆောင်ဂိုးတွေက ဘာစီလိုနာကို ခက်ခဲစေခဲ့တယ်။ မက်ဆီ Messi ရဲ့ မှော်ဝင်ပြစ်ဒဏ်ဘောကန်ချက်၊ ဆွာရက်ဇ် Suarez(၂ဂိုး) ပေါ်လင်ဟို Paulinho တို့ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့ ကျိန်စာဆိုးကို ပယ်ဖျက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာ ၁-၀ အက်သလက်တီကို (၄.၃.၂၀၁၈)
ဒီပွဲမတိုင်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး (၅)ပွဲမှာ (၃)ပွဲအထိ သရေပွဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဒုတိယနေရာက အက်သလက်တီကိုအသင်းရဲ့ ဖိအားပေးမှုတွေကို ပြန်လည်လျှော့ချနိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအတွက် အနိုင်ဂိုးကိုတော့ လှပသေသပ်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ဘောကန်ချက်ကနေ မက်ဆီ Messi ကသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီဂိုးဟာ သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက် သွင်းဂိုး (၆၀၀)ပြည့် ဂိုးအဖြစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲကို အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် လက်ကျန် (၁၁)ပွဲကစားဖို့ ကျန်သေးချိန်မှာ ဒုတိယနေရာက အက်သလက်တီကိုအသင်းကို (၈)မှတ်အထိဖြတ်ကာ အမှတ်ပေးဇယားကို ဖိအားကင်းကင်းနဲ့ ဆက်လက်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
လာလီဂါခ်န္ပီယျံဖစ္ခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ထူျးခားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတြေနဲ့ အေရးပါတဲ့ နိုင္ပြဲမ်ား
ဒီပို့တီပို့အသင်းကို အေဝးကြင်းမွာ အနိုင်ယူပြီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘောလုံးရာသီ မကုန္ခင္မွာဘဲ စပိန္လာလီဂါ ခ်န္ပီယံဆုကို ဘာစီလိုနာအသင်း (၂၅)ကြိမ်ျေမာက် ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က ယွဉ်ပြိုင္ကစားခဲ့တဲ့ စပိန္ဘုရင့်ဖလားပြိုင္ပြဲမွာလည်း ဆီဗီလာအသင်းကို ဂိုျးပတ်အနိုင်ရယူပြီး ခ်န္ပီယျံဖစ္ခဲ့တာကြောင့် တစ်ရာသီအတြင်ျးပည္တငြ်းဖလား (၂)လုံးကို ရယူနိုင္ခဲ့တာပါပဲ။ အခုနွစ်ရာသီအစမွ ဘာစီလိုနာကို စတင္ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ နည်ျးပ ဗယ္လ္ဗာဒီ Valverde အတြက္လည်း ပထမဆုံးရာသီမွာပဲ ဖလား (၂)လုံး ရရွိခဲ့တျာဖစ်ပြီး လက္က်န္ပြဲစဉ်တြေမွာပါ အသင်းကို ရှုံးပြဲမရွိအောင် စြမ်းဆောင်ပေးနိုင္ခဲ့ရင် လာလီဂါ New Era မွာ ပထမဆုံးအကြိမ် ရှုံးပြဲမရွိဘဲ ခ်န္ပီယံဆုကို ရယူနိုင္တဲ့ အသင်းအျဖစ် မွတ္တမ်းဝင္နိုင်တော့မျွာဖစ္ပါတယ်။ ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ ရိုးမားအသင်းရဲ့ အံ့အားသင့်ဖြယ် ကေ်ာ်ျဖတ်ျခင်းကို ခံခဲ့ရေပမယ့်ျပည္တငြ်းမွာတော့ အောင်ျမင္မှုတြေ ရရွိခဲ့ပြီး အသင်း သမိုင်းတစ်လွေ်ာက် (၈)ကြိမ်ျေမာက်ျပည္တငြ်းဖလား (၂)လုံး ခ်န္ပီယံအသင်းအျဖစ် မွတ္တမ်းဝင္နိုင္ခဲ့ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ လာလီဂါပြိုင္ပြဲနဲ့ ပတ်သက္တဲ့ ကိန်းဂဏန်းမ်ားနဲ့ အေရးပါတဲ့ နိုင္ပြဲတြေကို ဖော်ျပေပးလိုက္ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ လာလီဂါ ကိန်းဂဏန်းမ်ား
၂၅ – လာလီဂါခ်န္ပီယံဆုကို ရယူနိုင္ခဲ့တဲ့ အကြိမ်အေရအတြက်ျဖစ္ပါတယ်။ လာလီဂါသမိုင်းတစ်လွေ်ာက္မွာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ်အသင်း (၃၃-ကြိမ်)အပြီး ဒုတိယျေမာက် အေအာင်ျမင္ဆုံး အသင်းလည်ျးဖစ္ပါတယ်။
၄ – ပြိုင္ပြဲပြီးဖို့ (၄)ပြဲအလိုမွာ ခ်န္ပီယျံဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ မွတ္တမ်းဟာ (၂၁)ရာစု လာလီဂါပြိုင္ပြဲရဲ့ အေကာင်းဆုံး စံခ်ိန္လည်ျးဖစ္ပါတယ်။
၃၄ – ဘောလုံးရာသီတစ္ခုအတြင်း (၃၄)ပြဲဆက် ရှုံးပြဲမရွိတဲ့ စံခ်ိန္ကို ရရွိခဲ့တျာဖစ်ပြီး ၁၉၇၉-၈၀ ရာသီက ဆိုစီဒက်အသင်း တင္ထားခဲ့တဲ့ (၃၂)ပြဲ စံခ်ိန္ကို ကေ်ာ်ျဖတ္နိုင္ခဲ့တျာဖစ္ပါတယ်။
၂၆ – အမွတ်ပေးခ်န္ပီယံဆုကို (၃၄)ပြဲ ကစားအပြီး ရယူနိုင္ခဲ့တဲ့ နိုင္ပြဲ အေရအတြက်ျဖစ္ပါတယ်။
၃ – ရာသီကုန္ခ်ိန်အထိ ရှုံးပြဲမရွိအောင် ကစားနိုင္ခဲ့ပါက လာလီဂါသမိုင်းတစ်လွေ်ာက် တတိယျေမာက် ရှုံးပြဲမရွိဘဲ အမွတ်ပေးခ်န္ပီယံဆု ရယူနိုင္ခဲ့တဲ့ အသင်းအျဖစ် မွတ္တမ်းဝင္နိုင္မျွာဖစ္ပါတယ်။ ဘီလ္ဘာအို (၁၉၂၈-၂၉)နဲ့ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ် (၁၉၃၁-၃၂)အသင်းတြေဟာ (၁၀)သင်းသာ ယွဉ်ပြိုင္ကစားရစဉ် အဆိုပါ မွတ္တမ်းကို ရရွိခဲ့တျာဖစ်ပြီး လာလီဂါပြိုင္ပြဲကို အသင်းပေါင်း (၂၀)နဲ့ ပုံစံသစ်ျေပာင်းလဲက်င်းပတဲ့ နောက္ပိုင်းမွာတော့ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ပထမဆုံးအသင်းအျဖစ် မွတ္တမ်းဝင္နိုင္မျွာဖစ္ပါတယ်။
၄၁ – နောက္ဆုံးယွဉ်ပြိုင္ကစားခဲ့တဲ့ (၄၁)ပြဲဆက္တိုက် ရှုံးပြဲမရွိအောင် ကစားထားပြီး လာလီဂါသမိုင်းမွာ ပြဲဆက်အမ်ားဆုံး ရှုံးပြဲမရွိတဲ့ မွတ္တမ်ျးဖစ္ပါတယ်။
၁၆ – ဘာစီလိုနာအသင်းရရွိထားတဲ့ သြင်းဂိုး (၈၇)ဂိုးကို သြင်းယူပေးထားတဲ့ ကစားသမား အေရအတြက်ျဖစ္ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ အေရးပါတဲ့ နိုင္ပြဲတခ်ို့
ဘာစီလိုနာ ၅-၀ အက္စ္ပန်ညို (၉.၉.၂၀၁၇)
နေမာ Neymar ထြက္ခြာသြားပြီးနောက္ပိုင်း အသင်းတိုက္စစ္ပိုင်းအားနည်းနေတာကျိုပျုပင္နိုင္ဖို့အတြက် မထင္မွတ္ထားတဲ့ ကစားကြက္တစ္ခုကို နည်ျးပ ဗယ္လ္ဗာဒီ Valverde ပထဆုံျးေပာင်းလဲသုံးစြဲခဲ့တဲ့ ပျြဲဖစ္ပါတယ်။ နောက္ပိုင်းနွစ်တြေမွာ တောက်လွေ်ာက် သုံးစြဲလာတဲ့ တိုက္စစ် (၃)ဦးထား ကစားရာကေန (၄-၄-၂)ကစားကြက္ကိုျေပာင်းလဲခဲ့တာပါပဲ။ ဆြာရက္ဇ် Suarez မက္ဆီ Messi (၂)ဦးကိုသာ တိုက္စစ်အတြဲအျဖစ် ထားကာကစားခဲ့တဲ့ ဒီကစားကြက္က နည်ျးပ ဗယ္လ္ဗာဒီ Valverde ရဲ့ မွန္ကန္တဲ့ျေပာင်းလဲမှုတစ္ချုဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ကတ္တလန္ဒါဘီမွာ ဂိုျးပတ္နိုင္ပြဲနဲ့ သတ်သျေပနိုင္ခဲ့ပါတယ်။
ရီးယဲလ္မက္ဒရစ် ၀-၃ ဘာစီလိုနာ (၂၃.၁၂.၂၀၁၇)
ဘာနေဗ်ူးကြင်းမွာ ယွဉ်ပြိုင္ကစားခဲ့တဲ့ အယ္လ္ကလက္စီကိုဒါဘီပြဲမွာ ပုံစံကောင်းတျြေပသနိုင္ခဲ့ပြီး အဓိကပြိုင္ဘက်အသင်းကို အေဝးကြင်း ဂိုျးပတ္နိုင္ပြဲနဲ့ ဦးခ်ိုးနိုင္ခဲ့တဲ့ ပျြဲဖစ္ပါတယ်။ ရီးယဲလ္တို့ ပထမပိုင်းမွာ ဘာစီလိုနာတိုက္စစ္ကို ထိန်းခ်ုပ္နိုင္ခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယပိုင်းမွာ ဆြာရက္ဇ် Suarez ရဲ့ သြင်းဂိုးနဲ့ ခံစစ်ပြိုဆင်းသြားခဲ့ပြီး မက္ဆီ Messi ရဲ့ ပယ္နယ္တီသြင်းဂိုး၊ လူစားဝင္ကစားသမား အဲလစ္ဗီဒယ္လ် Aleix Vidal ရဲ့ သြင်းဂိုးတြေနဲ့ နိုင္ပြဲရယူနိုင္ခဲ့ပါတယ်။ အဲလစ္ဗီဒဲလ် Aleix Vidal သြင်းယူခဲ့တဲ့ တတိယဂိုးကို မက္ဆီ Messi ဖန္တီးပေးခဲ့ခ်ိန္မွာ ဖိနပ္တစ္ဖက် ကျတ္က်ြန္ခဲ့တာက ဒီပြဲရဲ့ အမွတ်ရစရျာဖစ်ရပ္တစ္ခုလည်ျးဖစ္ခဲ့ပါတယ်။
ဆိုစီဒက်အသင်းရဲ့ အိမ္ကြင်း ဆန္ဆီဘတ်ရွန္မွာ (၂၀၀၇)နောက္ပိုင်း ဆယ္စုနွစ် တစ္ခုကေ်ာ်ကြာ လာလီဂါ နိုင္ပြဲမရရွိခဲ့တာကို ခ်ိုးဖ်က္နိုင္ခဲ့တဲ့ ပျြဲဖစ္ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်း အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့် ဆန္ဆီဘတ်ရွင္က်ိန္စာဆိုးလို့ျေပာလို့ရေအာင္ကို ဆိုစီဒက်အသင်းရဲ့ အေစာပိုင်း ဦးဆောင္ဂိုးတြေက ဘာစီလိုနာကို ခက္ခဲစေခဲ့တယ်။ မက္ဆီ Messi ရဲ့ မွော်ဝင်ျပစ္ဒဏ်ဘောကန္ခ်က်၊ ဆြာရက္ဇ် Suarez(၂ဂိုး) ပေါ်လင်ဟို Paulinho တို့ရဲ့ သြင်းဂိုးတြေနဲ့ က်ိန္စာဆိုးကို ပယ္ဖ်က္နိုင္ခဲ့ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာ ၁-၀ အက်သလက္တီကို (၄.၃.၂၀၁၈)
ဒီပြဲမတိုင္ခင် ကစားခဲ့တဲ့ နောက္ဆုံး (၅)ပြဲမွာ (၃)ပြဲအထိ သေရပြဲတြေနဲ့ ကြုံတြေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက္မွာတော့ ဒုတိယေနရာက အက်သလက္တီကိုအသင်းရဲ့ ဖိအားပေးမှုတြေကျိုပန္လည်လွေ်ာ့ခ်နိုင္ခဲ့တဲ့ ပျြဲဖစ္ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအတြက် အနိုင္ဂိုးကိုတော့ လွပေသသပ္တျဲ့ပစ္ဒဏ်ဘောကန္ခ်က္ကေန မက္ဆီ Messi ကသြင်းယူပေးခဲ့တျာဖစ်ပြီး ဒီဂိုးဟာ သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝတစ်လွေ်ာက် သြင်းဂိုး (၆၀၀)ျပည့် ဂိုးအျဖစ္လည်း မွတ္တမ်းဝင္ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပြဲကို အနိုင်ယူနိုင္ခဲ့တဲ့အတြက် လက္က်န် (၁၁)ပြဲကစားဖို့ က်န်သေးခ်ိန္မွာ ဒုတိယေနရာက အက်သလက္တီကိုအသင်းကို (၈)မွတ်အထျိဖတ္ကာ အမွတ်ပေးဇယားကို ဖိအားကင်းကင်းနဲ့ ဆက္လက်ဦးဆောင္နိုင္ခဲ့ပါတယ်။
by Naing Linn . 50 mins ago